पौष २७, काठमाडौँ । एउटै व्यक्तिसँग तीनपटक विवाह दोस्रोपटक फेरि सम्बन्ध विच्छेद! यो कस्तो आग्रह होर? कस्तो नियतिरु वैवाहिक सम्बन्धको पनि के अर्थ रह्योर ? विवाह, सम्बन्ध र विच्छेद– खरिपाटीमा लेख्दै मेट्दै गरेजस्तो ! यस्तै कुरा मडारिएपछि सावित्रीको मनले यसपटकको सम्बध विच्छेद स्वीकार्न सकेन। लोग्नेले सोचेर आजै जवाफ दिनु भनेको छ। ऊ रनभुल्लमा परी।
औंसीको रात। धेरै पर देखिएको ‘लन्डन ब्रिजु र ‘लन्डन आईुमा बलेका चहकिला बत्ती र सडकमा हुइँकिएका गाडीले सहर जागै रहेको संकेत दिइरहेको थियो। सहरभरि बलेका बत्तीलाई हेर्दैगर्दा पूर्णिमाको दिनभन्दा औंसीकै रात राम्रा देखी सावित्रीले।
बेलायतमै दुई वटा छोरी जन्मिए। दुवै काम गर्दै गरे, बच्चा पनि हुर्काउँदै गए। लन्डनको ब्लाकहिल जस्तो सुन्दर ठाउँमा अपार्टमेन्ट किने। खुब मिलेर बसेका यिनीहरूलाई चिन्नेहरू भन्दथे– छोटो समयमा कति धेरै प्रगति ?
“पैसा जति भए पनि पुग्दैन। हामीलाई नपुग्दो के छ ररु मेरो पार्टटाइम भए पनि दुवै जनाको जागिर छ। अपार्टमेन्ट छ। पुरानै भए पनि चलिरहेको गाडी र काठमाडौंमा सानो घर पनि छ। आफू–आफूलाई अलग गर्ने यस्तो काम नगरौं,” सावित्रीले असहमति जनाई।
“हामी बसेको बिल्डिङमा बस्ने पाकिस्तानी रदिफ, बंगाली चटर्जी र मसँगै काम गर्ने नाइजेरियन केभिनले पनि यसै गरेको छ,” सावित्रीलाई मनाउन अमितले प्रमाण देखायो।
‘आमाको दूध चुसेर भएन बाउको घुँडा चुस्ने काम१ भगवान्ले जति दिएका छन् त्यति खाम,”सावित्रीले फेरि अडान लिई।
‘हाम्रो डिभोर्स कागजमा मात्रै हो। बस्न त सँगै बस्ने हो नि। कानुनी रूपमा अलग देखिएपछि तिमी ‘सिंगल मम्’ हुनेछौ। बच्चा साना भएकाले तिमीले काम गर्नु पर्दैन। बच्चाको लालनपालन र घरभाडा भनेर एकमुष्ट सरकारी रकम महिनैपिच्छे पाउनेछौ। तिमीले र मैले कमाए बराबर रकम एक्लै तिम्रो नाममा आउँछ। मैले कमाएको पैसा अलग्गै बचत। अनि त आराम नै आराम,’अमितले फाइदाको कुरा बतायो।
‘तीनपटक विवाह भयो हाम्रो र एकपटक डिभोर्स भइसक्यो। हुन त यो सबै सहमतिमै राम्रोको लागि भएको हो। अब दोस्रो डिभोर्स सरकारका आँखामा छारो हालेर अलिकति पैसा जोगाउनलाई हैन तरु वैवाहिक सम्बन्ध भनेको आत्मालाई मनाएपछिको कुरा हो। यसरी पुनः विवाह, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता कागजी कुराको नकारात्मक प्रभाव मनमा पर्छ। भोलि साँच्चै कागजमा भत्काइएको सम्बन्ध मनले अस्वीकार गर्दै गयो भनेरुु सावित्रीले आशंका प्रकट गरी।
‘त्यत्रो समाजलाई चुनौती दिएर गरेको विवाह र हाम्रो प्रेम त्यति कमजोर छैन,’अमितले प्रेमको गाँठो झन् धेरै कस्दै भन्यो।
‘ठिकै छ नि त, तर पछि आउने दुष्परिणामको जिम्मेवार तपाईं। कानुनको लप्पनछप्पन म जान्दिनँ। सबै तपाईंको जिम्मा,’सावित्रीले सचेत गराई।
‘त्यो सब म मिलाइहाल्छु नि,ु अमितले विश्वास दिलायो।
बच्चा हुर्काउनु र पढाउनु पर्ने ुसिंगल मम्ु भएको नाताले बेलायतको कानुनअनुसार सावित्रीको बैंक खातामा सरकारी सुविधाको पहिलो किस्ता आयो। सो रकम देख्दा छक्क परी ऊ। लोग्ने–स्वास्नीले काम गरेर कमाए बराबरकै रकम थियो। अब भने सावित्रीलाई उसले गरेको निर्णय गलत लागेन। धेरै खुसी भई।
‘कस्तो लाग्यो त हाम्रो चलाखीरुु कामबाट फर्केर आएपछि अमितले सोध्यो।
‘गज्जब राम्रो। म त त्यसै डराएकी रहेछु। कस्ती सोझी हगि म पनि’ सावित्रीले अज्ञानता प्रकट गरी।
‘अब अर्को गेम आएको छ। पैसा कमाउने,”अमितले भन्यो।
‘कस्तोरुु मेहनत नगरी आउने पैसा देखेकीले ऊ लालची हुँदै सोधी।
‘मेरो मनको ढोका त्यति कमजोर छैन। फेरि त्यसमा तिमीले लगाएको भोटे ताल्चाको चाबी तिमीसँगै छ नि। त्यहाँ अरूलाई प्रवेश निषेध छ,’अमितले मनको ढोका सुरक्षित रहेको प्रमाण दियो।
‘खै के भन्नूर? त्यति धेरै पैसा आउने रहेछ…..ल ठिकै छ नि त। तर बेइमानीचाहिँ नगर्नू नि। त्यस आइमाईलाई भेट्दै नभेट्नू,’ पैसाले पगाल्यो सावित्रीलाई।
आखिर लोग्नेको कमाइबेगर मात्र होइन आफूले पनि कामै नगरी खर्च कटाएर बचतसमेत हुने गरी सरकारी रकम आउने देखेपछि उसमा आत्मविश्वास जाग्यो। त्यो आत्मविश्वासले लोग्ने के हो ररु भन्नेसम्म पुर्योयो। आर्थिक चिन्ता भएन। बच्चा नहुर्कुन्जेल सरकारले पालिहाल्दो रहेछ। आखिर ऊ पनि बेलायतकै नागरिक भइसकेकी थिई।
‘यी स्वास्नी मानिसहरू अलिकति धनसम्पत्ति र बच्चा भएपछि आफूलाई पूर्ण नारी ठान्दछन्। लोग्नेको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् र वास्ता गर्न छाड्छन्,’विस्तारै सावित्रीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गयो उसको मनमा।
घरमा पैसाको कारणले शान्ति हरायो। घरमा अशान्ति र मनमुटाव बढ्न थालेपछि घरमा बिताउनुपर्ने समय बाहिर साथीभाइसँग र ‘पबुमा जान थाल्यो। बेलाबेलामा घर ढिला आउन थाल्यो। किन ढिला आएको भनेर सोध्दा झर्कोफर्को गर्ने र अनेक बहाना बनाएर उम्कने प्रयास गर्थ्यो। नारी मन त हो– ऊ घर ढिला आउनाको कारण त्यही पाकिस्तानी महिलासँग उठबस ठानी। अमितले सौता ल्याउन आँटेको ठहर गरी।
त्यो चतुरले पहिले त सावित्रीको ुब्रेन वाशु गर्यो। बेलायतमा प्राप्त नारी अधिकार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरा पढाएर सावित्रीलाई मानसिक रूपमा सशक्त बनायो। त्यसपछि बिस्तारै मायाजाल बिछ्यायो। उसको जालमा परी सावित्री। आखिर ऊ जवान थिई। जवान हुनुको अर्थमात्र सम्झाएन त्यसले सावित्रीको जवानी नै पुनर्ताजगी गराइदियो।
टेकिरहेको उसको पाइताले एक्कासि भूकम्पको धक्का महसुस गर्योत। खुट्टा लुला भए। कसरी यो खबर सुनाउन थुनामा रहेको अमितलाई भेट्न जानूरु त्यो चतुरे कहाँ होलारु समस्यामाथि समस्या आइलाग्दा साढे सातको दशा लागेको ठानी।
अन्ततः अमितलाई भेट्न जानैपर्ने निर्णय गरी। कुन मुख लिएर जाऊँरु साना बच्चा लिएर कसरी जानेरु सोच्दै थिई। फेरि डोरबेल बज्यो।
‘को होरुु सावित्रीले माथिबाटै इन्टरकम फोनमा सोधी।
‘तपाईंले पुनर्विवाह गर्नुभएकोमा बधाई छ। तपाईंको सफल दाम्पत्य जीवनको लागि शुभकामना छ। तपाईं अब ‘सिंगल मम्’ नरहेकोले राज्यबाट प्राप्त हुने ‘सिंगल मम्ला’ई दिइने सुविधा अब उप्रान्त नपाइने जानकारी गराइन्छ।’
चिठीको व्यहोरा पढेर उसका शरीर लल्याकलुलुक भए। खलखली पसिना आयो। लिफ्टको ढोका खुल्यो। बाहिर निस्की। ऊ त भुइँतलामै रहिछ। सत्ताइसौं तलामा लिफ्ट पुगेपछि कतिखेर ढोका खुलेर बन्द भई फेरि तलै पुगेको उसलाई पत्तै भएन। नगरिक न्यूज